Ilaha Jannada, Qurxin iyo Nasasho | Bezzia
Ilaha beerta, qurxin iyo nasasho
Maria vazquez | 04/06/2021 18:00 | Qurxinta
Ilaha biyaha ayaa soo maray taariikhda a gabal aasaasiga ah ee jardiinooyinka. Cunsur qurxin oo aan ku darin kaliya dabeecad iyaga, laakiin sidoo kale gacan ka geysata abuurista jawi deggan oo milicsiga leh mahadnaqa biyaha.
Xilliga kulaylaha qalalan sida kuweenna, ilaha beerta sidoo kale waa aalad lagu soo kordhinayo macaan meeshan bannaanka ah. Sababaha rabitaanka beertaada il ka yeelosidaa darteed way badan yihiin. Sida badan sababaha ay tahay inaad tixgeliso inaad doorato mid.
1 Arimaha ugu horeeya ee laga fiirsanayo
2 Noocyada ilaha beeraha
2.1 Iyada oo ah qaabkeeda / qalabkeeda
Arimaha ugu horeeya ee laga fiirsanayo
Waxba kama sugi doontid haddii aad bilowdo raadinta ilaha beerta adigoon hore u falanqeyn meesha aad rabto inaad dhigto iyo sifooyinka aad ka doonayso dhexdeeda. Fursadaha ka jira suuqa ayaan dhammaad lahayn oo aad isweydiiso dhawr su’aalood intaadan bilaabin waxay soo dedejineysaa raadintaada.
Xagee dhigeysaa Bartamaha beerta ama derbi ka soo horjeedka?
Miyaad doorbideysaa ilo shaqo oo caado ah ama moodeel horay loo sii diyaariyay?
Qaab noocee ah ayaad u raadineysaa beertaada? Classic, casriga ah, Mediterranean, minimalist, dabiiciga ah ...
Dhawaaqa isha ma muhiim buu kuu yahay? Qiyaasta socodka iyo dhererka diyaaradda biyaha ayaa saameyn ku yeelan doona xaddiga buuqa ka imanaya isha.
Ma ku xidhi kartaa biyaha socda? Diyaar ma u tahay inaad shaqo qabato mise waxaad doorbideysaa inaad adeegsato noocyada kale ee farsamooyinka hawlgalka?
Kajawaabida su'aalahan waxay kaa caawin doontaa inaad qaabeyso nooca font ugu habboon beertaada. Sidan ayaad ku kala shaandheyn kartaa raadintaada oo aad ku gaari kartaa ilaha beerta ee sida ugu dhakhsaha badan kuu xiiseeya. Kadib, inta udhaxeysa fursadaha dhabta ah, naqshadeynta iyo miisaaniyaddaba waxay kaa caawin doonaan inaad gaarto go'aanka ugu dambeeya.
Noocyada ilaha beeraha
Haddii aad isku dayday inaad ka jawaabto su'aalaha, dhib kugu noqon maayo inaad maleyso inay jiraan arrimo badan oo aan eegi karno si aan ugu kala soocno ilaha beerta noocyo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, maanta waxaan kaliya diiradda saari doonnaa laba, kuwaas oo aan u aragno kuwa ugu muhiimsan: waxqabadka iyo qalabka.
Iyada oo ah qaabkeeda / qalabkeeda
Maaddada ama guntinta qalabka laga sameeyay isha beerta go'aamiso qaabkaaga. Inta badan ilaha qaabka caadiga ah waxaa laga sameeyaa dhagax, iyo sidoo kale kuwa loo yaqaan 'Mediterranean style' waa caadi in la helo waxyaabo dhoobada laga sameeyo.
Dhagaxyada dhagaxa: Ilaha dhagxaanta dabiiciga ah waxaa loo isticmaali jiray taariikhda oo dhan inay yihiin udub dhexaadka beerta. Qaybaha la xardhay iyo qaababka farshaxanka ayaa dhaqan ahaan qabsatay bartamaha jardiinooyinka ugu quruxda badan. Kuwa leh barkadaha ama barkadaha, dhinacooda, waxay dhaqan ahaan qurxiyeen derbiyada guryaha waaweyn ee dalka. Labadaba waxaa lagu gartaa qiimahooda sare.
Ilaha dhoobada leh: Ilaha noocan ah waxaa badanaa laga sameeyaa sibidh waxaana lagu qurxiyaa dusiyo. Dhaqanka carabta waxay ku soo bandhigaan qaabab wareegsan iyo ujeedooyin aad u midab badan; Kuwani waa ilaha aan guud ahaan ka helno koonfurta Spain. Si kastaba ha noqotee, waa suurtagal in laga abuuro noocyo kale oo xarfaha noocyada ka sameysan taararka, noocyada leh bilicsanaanta casriga ah. Sidee? Adoo adeegsanaya xariiqyo toosan iyo dusiyo midabyo madow iyo caddaan ah.
Ilaha biraha: Waqti ka dib, ilaha biraha waxay bartaan astaamo aad u dabeecad badan oo iyaga siisa dabeecad. Birta waxaad ka heli kartaa ilo-been abuur ah oo leh bilicsanaanta caadiga ah, laakiin sidoo kale kuwa kale oo laga sameeyay qaybo bir ah oo fudud oo hela bilic casri ah oo si fiican ugu habboon jardiinooyinka looyaqaanno 'miniiste' ama 'Oriental-dhiirrigelinta leh'.
Muuqaal aad muhiim u ah in lagu xisaabtamo waa nooca ay ku shaqeyso isha. Intooda badani waxay leeyihiin matoorro koronto ku shaqeeya inaad ku xirmi karto shabakada ama aad ku dhex mari karto batariyada banaanka ama baalayaasha qoraxda. Maskaxda ku hay in ay kuxirantahay meesha aad rabto inaad dhigto isha, ku xirida shabakada korantada waxay ubaahantahay shaqooyin dheeri ah iyo kordhinta qiimaha.
Noocee ah isha aad jeclaan lahayd inaad ku qurxiso beertaada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Ilaha beerta, qurxin iyo nasasho
Dib udhaca hadalka caruurta
Waxa la cuno si loo yareeyo PMS